बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय माग्दै २ नं. प्रदेशमा प्रदर्शन – Pahilo Page
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय माग्दै २ नं. प्रदेशमा प्रदर्शन
१७ मंसिर २०७५, सोमबार २०:५८ 557 पटक हेरिएको
जनकपुरधाम, १७ मंसिर । बलात्कारपछि हत्या भएको निर्मला पन्तलाई न्यायको माग राख्दै पुनः प्रदेश नम्बर दुईको जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन नेपाल तरुण दलले निर्मलाको हत्या भएको चार महिना बितिसके पनि अपराधी कानुनी दायरामा आउन नसकेको भन्दै जनकपुरमा प्रदर्शन गरिएको हो । बलात्कारपछि हत्या जस्तो जघन्य अपराधिक घटनामा संलग्न अपराधीलाई लुकाउन र ढाकछोप गर्न कतै सरकार त लागेको छैन भन्दै तरुण दलले प्रश्नसमेत गरेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ पिडडिया माइस्थानस्थित नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयबाट निक्लेको तरुण दलको विरोध जुलुस नगरको विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गरी जिल््ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । निर्मला हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा सशक्त आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
यसका साथै तरुण दलले चरम महँगीका कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती भोग्नु परिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अन्य सामग्रीहरुमा मूल्यवृद्धि गरेर सरकार शोषणमा उत्रेको उसको आरोप रहेकोे छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं निर्माण सामग्री लगायतमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन पनि तरुण दलले माग गरेको छ ।
सबै तह र तप्कामा भइरहेको भ्रष्टाचारका कारण जनतालाई समस्या भोग्नु परिरहेको यथार्थबाट सरकार अवगत रहे पनि नियन्त्रण गर्न असफल रहेको तरुण दलले बुझाएको ज्ञापनमा उल्लेख छ । नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइड बडी’ विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न पनि तरुण दलले माग गरेको छ ।